Mụta ihe banyere taya-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Mụtakwuo banyere taya
Taya bụ otu akụkụ dị mkpa nke ụgbọ ala. Gịnị bụ ndụ nke ụgbọ ala taya? Ogologo oge ole ka taya nwere ike iji?
Ka anyị leba anya na ọdịnaya metụtara ya.
Nyocha nke usoro taya
Enwere ike kee akụkụ nke taya taya ụzọ anọ: ụkwụ, ubu, bead na bead.
Akụkụ nke ọ bụla nwere ọrụ nke ya, dị ka nzọ ụkwụ na-emetụta ala, na ubu na akụkụ ahụ na-arụ ọrụ nkwado.
Taya abughi otutu ahihia, enwere otutu ihe di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche n'ime ya - uzo uzo, nkpuchi nkpuchi, akwa akwa nchara (uzo 2), nkasi obi na-adighi nma, ihe nkpuchi ozu, nkpuchi ikuku.
Kedu otu esi enyocha nkọwapụta ụgbọ ala ụgbọ ala?
Nkọwapụta taya ahụ na-anọchi anya ọnụọgụ nọmba na akwụkwọ ozi, nke a ga-ebipụta n'akụkụ nke taya ahụ.
Nọmba mbu bu obosara nke taya ahu;
Nọmba nke abụọ na-anọchite anya mbadamba mbadamba;
Akwụkwọ ozi nke atọ na-anọchite anya usoro taya;
Nọmba na-esote na-egosi dayameta nke rim;
Mgbe ogbako ahụ gasịrị, nọmba na mkpụrụedemede na-egosi ndekpọ ibu na ogo ọsọ, karị. Akwụkwọ ozi dị na mbadamba ọnụ na dayameta nke rim na-anọchite koodu nke ụdị taya ahụ. Ihe kachasị na (R) bụ otu ihe ahụ (Z) maka taya radial.
Ndị ọzọ? (X) bụ taya taya kpụ ọkụ n’ọnụ, (1) nke nwere obere taya, na (B) bụ nke na-adịkarịghị mma.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbanwee taya ụgbọ ala?
Fọdụ ndị nwe ụgbọ ala kwenyere na nnọchi taya dabere na oge na kilomita iji kpebie ma ọ ga-agbanwe, mana usoro a enweghị usoro iwu na usoro sayensị.
A sị ka e kwuwe, ndị na-emepụta taya enyebeghị ụkpụrụ doro anya iji gosipụta oge iji gbanwee taya.
1. mbụ lee anya eyi akara
Branddị ọ bụla nke taya ga-enwe akara njiri na ala nke uzo nke nzọ ụkwụ.
Ihe nkedo akara nke taya ụgbọ ala izugbe bụ 1.6 mm, akara akara nke taya na-arụ ọrụ dị arọ bụ 2.4 mm.
Ownersfọdụ ndị nwere ụgbọ ala na-eche na ọ bụrụhaala na taya ahụ adịghị agbaji, ọ ga-aga n'ihu na-eji ya ọbụlagodi na usoro taya ahụ fọrọ nke nta ka ọ kwụsị. Tidị taya ndị ahụ dị oke egwu ma ọ bụrụ na ha anọgide na-eji ya.
Mgbe elu ụzọ dị mmiri mmiri ma ọ bụ na-amị amị, usoro nzọ ụkwụ na-agwụ ike, mmiri enweghị ike ịpịpụ n'okpuru taya ahụ enweghị ike iwepụ, nke dị mfe iji mee ka ụgbọala ahụ kwụsị ịchịkwa.
2. Ihe mmebi dị ka mgbape ma ọ bụ bulges pụtara, ma ọ bụ ụbọchị mmebi
N'ime usoro iji ụgbọ ala kwa ụbọchị, ihe ndị si mba ọzọ nwere ike ịpịnye taya ahụ, ma ọ bụ na ọ ga-akụrịrị ezé okporo ụzọ na mberede. Ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu ga-eduga na mmebi nke taya. Taya ndị mebiri emebi gụnyere ịgbawa, ebe a na-azọda ụkwụ, ịkpa ike n'akụkụ ebe dị egwu, na taya ndị rapaara na ihe ndị mba ọzọ ọtụtụ oge. Karịsịa, attentionaa ntị na ịhụ ihe ịtụnanya, taya ahụ nwere ike ịgbaji n'oge ọ bụla.
Akwadoro na taya ga-enyocha mgbe niile n'oge mmezi ụgbọ ala na nrụzi. Ọ bụrụhaala na mmebi ahụ a kọwara n’elu dị mkpa, ọ dị mkpa ịga ngwa ngwa ngwa ahịa taya ngwa ngwa o kwere mee iji chọpụta ma taya taya nke ụgbọ ala ahụ ọ dị mkpa ịgbanwe ya.
Ọbụlagodi na ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala ochie, otu esi achịkwa ọnọdụ okporo ụzọ, yana mmezi nke taya ahụ dị, taya ga-aka nká ọbụlagodi ogologo oge. Oge kachasị mma iji jiri taya bụ ihe dị ka afọ 5. Ọ bụrụ na ọ gafee oge a, ọ ga-amalite ịka nká, nke ga-agbanwe ngọngọ taya ahụ na enwere ihe egwu nke ịdọta taya.
Nduzi nhọrọ Taya
1. Taya flatness ruru
Akụkụ akụkụ ahụ na-ezo aka na pasent nke taya cross-sectional dị elu na oke obosara ya.
Akụkụ akụkụ dị elu taya dịtụ mma n'ihi ogologo n'akụkụ ha na ike cushioning ike.
Ma okporo ụzọ na-eche dara ogbenye, na nguzogide mpụta mgbe ọ na-atụgharị adịghị ike. N’aka ozo, taya nwere nkpa ala di ala na nnukwu nkuku di n’ime nwere obere sidewall na uzo di obosara, ya mere o nwere ebe buru ibu. Taya ahụ nwekwara ike iburu nnukwu nrụgide ma zaghachi nke ọma n'okporo ụzọ. Nguzogide dị ike n'akụkụ mgbe ị na-atụgharị, na njikwa ụgbọ ahụ siri ike.
2. Taya ụkpụrụ
Na mgbakwunye na ọmarịcha ọdịdị nke ụdị taya ahụ, ọ na-emetụtakwa njikwa nke ụgbọ ala ahụ, ma enwere mkpọtụ, arụmọrụ drainage, iyi mgbochi, wdg. Tirekpụrụ taya ụgbọ ala ndị a na-ahụkarị bụ ụdị ise nke usoro ntanetị, usoro ndozi kwụ ọtọ. , horizontalkpụrụ uzo kwụ ọtọ, usoro mgbochi na usoro asymmetrical. N'etiti ha, usoro uzo dị n'akụkụ nwere ezi esemokwu na usoro uzo ogologo nwere obere ịnya ụgbọ ala, nke kwesịrị ekwesị maka mkpa ịnya ụgbọ ala n'èzí SUV. Kpụrụ ngọngọ dị mma maka ebe apịtị ma ọ bụ snowy, ebe usoro asymmetric nwere ezigbo drainage.
3. Taya obosara
Ejiri obosara nke taya ahụ kpebie obosara nke taya ahụ, na obosara nke nzọ ụkwụ na-ekpebikwa ijide nke taya ahụ. Na usoro iwu, nke na-eme ka mpaghara kọntaktị ahụ dị n'etiti obosara ahụ na ala, nke ahụ na-eme ka taya ahụ ka mma na arụmọrụ ka mma. Agbanyeghị, ka ịgbanye taya na-aba ụba na-abawanye, otu a ka oriri mmanụ si abawanye. Ya mere, na ọkwa nke taya, ụdị ndị na-agbaso arụmọrụ ga-ahọrọ taya ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ụgbọ ala echekwa maka iji ụlọ eme ihe, nzọ ụkwụ ya agaghị adị obosara.
4. Taya arụmọrụ ndeksi
Cargbọ ala ụgbọ ala ga-enwerịrị akara atọ nke ejiji taya, traction, na ọgbọ na-ekpo ọkụ, nke a na-akpọ "atọ T".
Ihe ndozi ahụ na-ezo aka na njirimara nke na-atụle arụmọrụ ọrụ na ndụ ọrụ nke taya. Ihe dị elu karịa uru, otú ahụ ka ike na-adịgide adịgide taya. A na-ekewa akara ngosipụta nke taya, nke na-atụle nrapado n'etiti taya na ala, na ọkwa anọ, AA, A, B, na C, na AA bụ nke kachasị elu. Nkọwapụta nke na-emepụta okpomọkụ na-ezo aka n'ikike nke taya ịmepụta okpomọkụ, nke metụtara arụmọrụ dị elu nke taya.
Previous: Ntuziaka maka ịhazi ihe ngosi ntanetị na 127th Canton Fair
Ọzọ: Okwu mmalite nke ihe omuma ihe omuma nke taya